नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सधैं लागि रहनेछु : छिरिङ डोमा शेर्पा, मिसेस नेपाल टुरिजम तथा टुरिज एण्ड गुडविल एम्बसाडर – Everest Times News
नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशिल छिरिङ डोमा शेर्पा मिसेस नेपाल टुरिजमको उपाधि पाए लगतै नेपाल पर्यटन बोर्डको टुरिजम एण्ड गुडविल एम्बसाडर नियुक्त भएकी छन् । दुई महिना अगाडि नेपालको टुरिज एण्ड गुड्विल एम्बसाडर बनेकी छिरिङ डोल्मा यतिखेर अमेरिकाको विभिन्न राज्यमा पुगेर नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रचारप्रसारमा व्यस्त छिन । जहाँ पुगे पनि नेपाल चिनाउने पोष्टर र नेपालको बारेमा जानकारी दिँदै आएकी छिरिङ डोल्मासँग एभरेष्ट टाइम्सले गरेको कुराकानी ।
कति जना प्रतिष्पर्धीहरु बीच तपाईले मिसेस नेपाल टुरिजम्को उपाधी जित्नु भएको हो ?
४० दिनको तालिम पश्चात हामीले दुई चरणमा प्रतिष्पर्धा गरेका थियौं । पहिलो चरणमा ३६ जना बीच प्रतिष्पर्धा गरें । त्यसपछि अन्तिम र फाइनल चरणमा ११ जना बीच प्रतिष्पर्धा भएको थियो । दुबै चरणको प्रतिष्पर्धामा मैले जितेर यो उपाधी पाएकी हुँ ।
मिसेस टुरिजममा कसरी आउनु भयो ?
म नेपाल आमाकी हिमालकी छोरी हुँ । हामी शेर्पा पुस्तौदेखि पर्यटनमा संलग्न हुदै आएको समुदाय हो । लामो समयदेखिन पर्यटन क्षेत्रमा लाग्दै आउने क्रममा केही वर्ष अघि मैले मिसेस नेपाल टुरिजमको पोष्टरहरु र विज्ञापन देखें । त्यही बेलादेखि नै आफुभित्रको ट्यालेन्ट देखाउन पाउछु की भन्ने लागेको थियो । यस वर्ष प्रतिष्पर्धामा भाग लिएकी हुँ । यो प्रतियोगितामा भाग लिनुको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा थप योगदान दिनकै लागि हो । यसले मलाई विश्वमा नेपाल चिनाउन थप जोश जाँगार दिएको छ ।
मिसेस टुरिजम उपाधि जितेपछि कस्तो अनुभव भयो ?
पर्यटन क्षेत्रमा लाग्दै जाने क्रममा यो उपाधी जितेपछि निकै खुशी लाग्यो । शीरमा ताज पाउनुको साथै थप काम गर्ने आत्मविश्वास बढ्यो । यो सँगै काँधमा ठुलो जिम्मेवारी थपे जस्तो महसुस भएको छ । अब देशले मलाई के दिन्छ भनेर होइन असल नागरिकको नाताले मैले देशलाई के दिन सकिन्छ भन्ने सोचसँगै नयाँ बाटो पाएकी छु ।
पर्यटन क्षेत्रमा कहिलेदेखि लाग्नु भएको हो ?
म पर्यटन क्षेत्रमा लामो समयदेखि छु । नेपालको एक चर्चित ट्रेकिङ कम्पनी थामसेर्कु ट्रेकिङमा सेक्रेटरीको रुपमा काम गरें । त्यसपछि आफ्नै गु्रपहरु चलाउन थाले । मैले विशेष गरी काठमाडौं आसपास र पोखारतिरको साइटसिनसँगै ट्रेकिङ, हाइकिङ र र्‌याफटिङ चलाउदै आएकी छु ।
पर्यटन बोर्डको टुरिजम एण्ड कल्चर गुडविल एम्बसाडर भएपछि के के गर्ने योजना छ ?
पर्यटन बोर्डले यो जिम्मेवारी दिएपछि मैले धेरै योजनाहरु बनाएकी छु । त्यसमध्येमा सवैभन्द पहिलो प्रथामिकतामा रहेको योजना भनेको नेपाल सरकारले घोषणा गरेको भिजिट नेपाल २०२० लाई कसरी सफल बनाउने भन्ने छ । त्यसपछि पनि निरन्तर रुपमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा लागि रहनेछु ।
अमेरिकामा आएर के गर्नु भयो ?
अमेरिकामा आएर मिस नेपाल युएस कार्यक्रममा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनको सामाग्री बाँड्नुको साथै सवैलाई नेपालमा एक/एक जनाको दरले पर्यटक पठाउन अनुरोध गरें । त्यसैगरी न्युयोर्कमा म्याराथुन भइरहेको बेला त्यहाँ सहाभागी विभिन्न मुलुकका मानिसहरुलाई नेपाल पर्यटन वर्षको बारेमा जानकारी दिनुको साथै नेपाल चिनाउने पोष्टरहरु दिने काम गरें । यस्तो कार्य अमेरिकाको न्युयोर्क, नेब्रास्का, बोष्टन, न्यूजर्सी र कनेक्टिकट राज्यमा पुगेर पनि गरें । अझै थप राज्यहरुमा पनि जाने योजना रहेको छ ।
नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनसँगै अरु के गर्ने योजना छ ?
मैले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि धेरै योजनाहरु बनाएको छु । यो क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै भरियाहरु र गाइडहरु ट्रेकिङ जाने क्रममा मृत्यु भएपछि परिवारले दुख भोग्नु परेको पिडा देखेको छु । उनीहरुले भोग्नु परेको दुखमा साथ दिनका लागि मैले आफनै नाम गरेर छिरिङ डोल्मा फाउण्डेसन खोलेको छु । अब यो फाउण्डेसनमार्फत ट्रेकिङ र एक्सपिडिसनमा जाने भरिया र गाइडहरु मृत्यु भएर दुख पाएका परिवारका बालबालिकाहरुलाई पढ्नकासहयोग गर्ने योजना बनाएकी छु । यो सामाजिक सेवामुलक कार्यको लागि सवैसँग हामीले सहयोगको आशा गरिरहेका छौं ।